News | Premier Ventures
Premier Ventures updated their phone number.
Premier Ventures Business Phone Solution
Never miss any incoming phone calls to your office while you are Work From Home!
Our telephone lines let you work from Anywhere, at Anytime.
For more details, dial 09 765450399.
Covid-19 ကြောင့် Work From Home ဖြစ်နေပြီလား?
Work From Home ကြောင့် ကိုယ့်ရုံးဖုန်းကို ဝင်လာတဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေနဲ့ လွဲချော်နေလို့ စိတ်ညစ်နေပြီလား?
စိတ်မပူပါနဲ့ Premier Ventures က သင့်အား ကူညီပေးဖို့ အသင့်ရှိနေပါပြီ။
သင့်ရုံးကို ခေါ်ဆိုလာသော မည်သည့်ဖုန်းကို မဆို ကြိုက်တဲ့ အချိန်၊ ကြိုက်တဲ့ နေရာ ကနေပြီး အလွယ် တကူ ဖုန်းလက်ခံ ဖြေဆိုနိုင်ပါပြီ။
အခုပဲ ၀၉ ၇၆၅၄၅၀၃၉၉ ကို (ရုံးချိန်အတွင်း) ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။
Photos from Premier Ventures's post
Are you working in the Office or working from Home?
သင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ နှင့် သင့် မိတ်ဖက် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ရန် အခက်အခဲ ရှိနေပါသလား?
We can solve all your problem with our:
မိတ်ဆွေတို့၏ အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ အသင့်ရှိနေပါသည်။
Premier Ventures addedabutton to help you learn more about them.
VoIP lets you have the lowest rates for any calls using IP-Phones. We offerarange of high quality communication hardware. You can mix and match the IP-Phones with our recommended IP-PBX and in-house VoIP system that suits your preference.
VoIP စနစ်သည် IP ဖုန်းများကို အသုံးပြုပြီး သက်သာသော နှုန်းထားများဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ဆက်သွယ်ရေး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်း ရွေးချယ်ဝယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ထောက်ခံချက်ပေးထားသော
IP-PBX နှင့် အိမ်သုံး ရုံးသုံး VoIP စနစ်များကို IP ဖုန်းများဖြင့် သင့်စိတ်ကြိုက် ပေါင်းစပ် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။